Siiriya: Mucaaridka oo lagu eedeeyey weerar loo adeegsaday sunta-gaaska • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Siiriya: Mucaaridka oo lagu eedeeyey weerar loo adeegsaday sunta-gaaska
Siiriya: Mucaaridka oo lagu eedeeyey weerar loo adeegsaday sunta-gaaska
November 25, 2018 - By: Abdirizak Shiino
Xoogaga mucaaridka dalka Siiriya ayaa beeniyey inay iyagu ka danbeeyeen weerar xalay ka dhacay magaalada Aleppo, deegaankaasi oo ay hada gacanta ku hayaan ciidamada Dowlada Bashar Al Assad.
Dowlada Ruushka oo iyadu taageerta Bashar Al Assad ayaa maanta oo Axad ah war ay soo saartay ku sheegtay in weerarkan loo adeegsaday sunta [Chlorine gas], waxayna ku eedeeyeen in weerarkan geysteen kooxda Tahrir al-Sham oo fadhigooda yahay gobalka Idlib.
Weerarkan loo adeegsaday sunta ayaa la sheegay in isbitaalka loo dhigay in ka badan 100 qof oo rayid ah oo ay waxyeelo kasoo gaartay duqeynta ka dhacday magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Siiriya.
Kooxaha Mucaaridka ayaa dhankooda sheegay in falkan ay ka danbeeyeen ciidamada dowlada Siiriya oo doonaya inay dib u abaabulaan weerar ka dhan ah gobalka Idlib. Waxayna sheegeen in sidan ay horey kooxda Bashaar Al Assad uga geysteen deegaanada Ghouta iyo Khan Sheikhoun iyagoona weeraradaasi dusha u saaray mucaaridka.
Gobalka Idlib ee waqooyiga Siiriya ayaa laga dhaqan geliyey bishii September heshiis xabad joojin ah oo dhexmaray dowlada Ruushka, Turkiga iyo Iran oo kala taageera dhinacyada dagaalamaya, waxaana tan iyo xiligaasi deegaano badan oo kamid ah waqooyiga Siiriya laga dareemayey degnaansho.